I-SABC ifuna uMotsoeneng ahlanze izigidi - Ilanga News
Home Izindaba I-SABC ifuna uMotsoeneng ahlanze izigidi
I-SABC ifuna uMotsoeneng ahlanze izigidi
Usolwa ngokuzihlomulisa emalini yale nhlangano eseyisikhulu sayo
UMNU Hlaudi Motsoeneng oke waba yisikhulu kwaSABC.
IFUNA uMnu Hlaudi Motsoe-neng ahlanze u-R850 000 wezindleko zamacala akhe eyawukhokhela iMajavu Inc, eyayimmele ngesikhathi esayi-chief operations officer yayo iSABC.
Ngaphezu kwale mali, le nhla-ngano yezokusakaza ifuna uMnu Motsoeneng akhokhe u-R11 mi-llion, oyingxenye ka-R30 million azihlomulisa ngawo ngemuva ko-kwenza isivumelwano sika-R500 million neMultiChoice.
Ngokusho kwephephandaba iSunday Times, kuvela ukuthi iSpecial Investigating Unit (SIU), yathola ukuthi lesi sivumelwano sasinogcobho, futhi kuno-R10.7 million owasebenza ngokungekho emthethweni eSABC, emuva kokuba uMnu Motsoneng eqashe aba-ntu abangafanele, baphinde bathola namabhonasi.
Olunye udaba oluthinta uMnu Motsoeneng, ngolubekwe kwiSpecial Tribunal mayelana nokugu-nyaza kwakhe ukukhokhelwa kwezingwazi kwezomculo imihlo-mulo yesamba sika-R50 000 umu-ntu emunye.
Le mali kuthiwa yakhokhelwa abaculi abawu-53 ngo-2016 nge-qhaza abalibamba emzabalazweni wokukhulula leli lizwe embusweni wobandlululo.
Ukukhokhwa kwale mali nakho kwatholakala ukuthi kwakungekho emthethweni.
Isiyonke imali efunwa yile nhla-ngano kuMnu Motsoneng iwu-R24 million.
NgokweSABC, uMnu Motsoe-neng ngeke ayinuke impesheni yakhe uma engakwazi ukukhokha yonke le mali.
Le nhlangano ithi iyakucabanga nokuthi kudliwe izimpahla zakhe ukuze ikwazi ukubuyisa ingxenye yale mali.
UMnu Mostsoeneng uthi ngeke kwenzeke lokho, njengoba ethi u-R850 000 wamacala wakhokhwa esaqashwe yile nhlangano futhi kunomshwalense wokukhokhela amacala ezikhulu zale nhlangano, okuyiwona okumele ukhokhe le mali.
Uthi kunalokho yiyona le nhlangano emkweleta u-R22 million ngeqhaza lakhe lokuyitholela isivumelwano sokusebenzisana neMultiChoice esibalelwa ku-R800 million.
Kunamacala amaningi aqhubekayo iSABC neSIU abawabeke uMnu Motsoeneng.
Kuzokhumbukela ukuthi izinki-nga zikaMnu Motsoneng zaqala emuva kokuba i-DA yaveza ukuthi ukuqashwa kwakhe kwakungekho emthethweni, emuva komqingo owakhishwa nguMvikeli woMpha-kathi (u-Adv Thuli Madonsela) ngo-2013, owaveza ukuthi akanawo umatikuletsheni.
I-SABC yathola incwadi yenka-ntolo ethi nguye uMnu Motsoeneng okumele akhokhe lo R850 000.
Wazama ukusiphikisa lesi sinqumo eNkantolo YokweDluliswa KwamaCala kodwa wehluleka.
Ngenyanga edlule abameli ba-kwaWerkmans Attorneys abaqa-shwe yiSABC, babhalele iMachaba Attorneys emele uMnu Motsoe-neng, bethi kuno-R850 000 awu-kweletayo osunenzalo ka-R112 000.
Abameli bakhe baphendule ngokuthi angakwazi ukukhokha u-R20 000 ngenyanga kusukela ngomhla ka-1 kuMandulo (Septe-mber), kodwa iSunday Times ithi ithole ukuthi iSABC ikunqabile lokho.
UMnu Motsoeneng uvumile ukuthi yena ubezimisele ngokukhokha u-R20 000, kodwa wathi le nhlanga-no kumele ngabe iyifuna kwabo-mshwalense le mali.
Uqhube wathi imali yokuzibo-nga ibimfanele futhi neSABC ya-hlomula kakhulu kabi ngalesi sivumelwano.
Previous articleUsemkhulu umsebenzi ohlalele iKaizer Chiefs
Next articleIngwadla emndenini wesisulu sikamalugaju